Happy Boxing dayပါ အာဆငျနယျဖနျတို့ရေ…. – Premier League Special
အာဆငျနယျ အသငျးဟာ မွို့ခံပွိုငျဘကျ ခြဲလျဆီး အသငျး ကို သုံးဂိုး တဈဂိုးနဲ့အနိုငျယူပွီး ၇ ပှဲဆကျ နိုငျပှဲ ပြောကျဆုံးမှုကို ရပျတနျ့ နိုငျခဲ့ပါပွီ။ အာဆငျနယျအသငျးကို အားပေးကွတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျကတော့ ဒီ Boxing day နဟေ့ာ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ညတဈညဖွဈခဲ့ပါပွီ။
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၇)ပှဲဆကျတိုကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးနခေဲ့ရပွီး ရလဒျတှေ အလှနျဆိုးရှားနတေဲ့ အာတီတာရဲ့ အာဆငျနယျကတော့ စမဈရို ၊ တီယာနေး ၊ မာတီနယျလီ ၊ ဇာခါ တို့ တှခွေစှေမျးပွသနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပွိုငျဘကျ ခြဲလျဆီးအသငျးကို အနိုငျယူခဲ့ပွီး နိုငျပှဲပွနျလညျရှာတှခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ပှဲအစကတညျးကတိုကျစဈဆငျကစားခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပှဲခြိနျ(၃၅)မိနဈမှာ တီယာနေးကွောငျ့ရတဲ့ ပငျနယျတီကို လာကာဇကျက အမှားအယှငျးမရှိ ကနျသှငျးယူသှားခဲ့ပွီး အာဆငျနယျအသငျးအတှကျဦးဆောငျဂိုးကိုရယူသှားနိုငျခဲ့သလို ပထမပိုငျးပွီးခါနီးမှာ ၄၃ မိနဈမှာ ဖရီးကဈကနေ ဇာခါ ရဲ့သှငျးဂိုးကွောငျ့ ပထမပိုငျးမှာ (၂-ဝ)နဲ့ ဦးဆောငျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဇာခါ ရဲ့ဖရီးကဈကနဂေိုးထဲကို တိုကျရိုကျသှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးဟာ ၂၀၀၄ခုနှဈက သီယာရီအှနျနရီရဲ့နောကျပိုငျးမှာ ပထမဆုံးခြဲလျဆီးအသငျးရဲ့ဂိုးပေါကျထဲကို ဖရီးကဈကနေ တိုကျရိုကျသှငျးယူနိုငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျး ပှဲစပွီး ၁၀မိနဈအကွာမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျတတိယဂိုးကို ဆာကာက ဒီပှဲရဲ့ သှငျးဂိုးတှထေဲမှာ အလှပဆုံးသှငျးဂိုးဖွဈတဲ့ဂိုးအဖွဈ သှငျးယူသှားခဲ့ပါတယျ။
ဆာကာက ညာတောငျပံကနဂေိုးဧရိယာထဲကိုဆှဲယူလာခဲ့ပွီး ခြဲလျဆီးနောကျခံလူတှနေဲ့ ဂိုးသမားမနျဒီကို ကြျောပွီး ဂိုးထဲကို ဝဝေို့ကျပွီးကနျသှငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီဂိုးကတော့ ဒီည ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲတှထေဲက သှငျးဂိုးတှထေဲမှာ အလှပဆုံးသှငျးဂိုးတဈဂိုးဖွဈမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
ခြဲလျဆီးအသငျးကတော့ မိနဈ(၈၀)ကြျောမှသာ ပှဲအတှငျး ပထမဆုံး ဂိုးပေါကျတညျ့ကနျခကျြကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ (၈၅) မိနဈမှာ အိုဒှိုငျးက ညာတောငျပံကနေ ဂိုးရှေ့ ဖွတျတငျလိုကျတဲ့ ဘောလုံးကို အဘေရာဟမျရဲ့ ရငျဘတျနဲ့ထိပွီး ဂိုးဝငျသှားခဲ့တာကွောငျ့ ခြဲလျဆီး အသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးတဈဂိုးရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပှဲပွီးခါနီး နာကငျြအခြိနျပို (၁)မိနဈမှာ အာဆငျနယျအသငျးနောကျခံလူက မဆေငျမောငျ့ကို ပငျနယျတီဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံးလုရငျး လူခကြစားခဲ့သလိုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ကှငျးလယျဒိုငျက ပငျနယျတီအဖွဈသတျမှတျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီပငျနယျတီကို ခြဲလျဆီးအသငျးအတှကျ ဂြျောဂငျြဟိုကသှငျးယူခဲ့ပမေယျ့ အာဆငျနယျဂိုးသမားကဖမျးယူ သှားခဲ့တာကွောငျ့ နောကျထပျခပြေဂိုးတဈဂိုးရရှိမယျ့ အနအေထားကနဆေုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။
ကနျြရှိနတေဲ့မိနဈတှမှော နှဈသငျးစလုံး နောကျထပျသှငျးဂိုးတှမေရရှိတော့ပဲ ပှဲအပွီးမှာ အာဆငျနယျက (၃-၁)ဂိုးနဲ့ ခြဲလျဆီးအသငျးကိုအနိုငျရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
Happy Boxing dayပါ အာဆင်နယ်ဖန်တို့ရေ….
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီး အသင်း ကို သုံးဂိုး တစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး ၇ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးမှုကို ရပ်တန့် နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အာဆင်နယ်အသင်းကို အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီ Boxing day နေ့ဟာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ညတစ်ညဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၇)ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရပြီး ရလဒ်တွေ အလွန်ဆိုးရွားနေတဲ့ အာတီတာရဲ့ အာဆင်နယ်ကတော့ စမစ်ရို ၊ တီယာနေး ၊ မာတီနယ်လီ ၊ ဇာခါ တို့ တွေခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအစကတည်းကတိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပွဲချိန်(၃၅)မိနစ်မှာ တီယာနေးကြောင့်ရတဲ့ ပင်နယ်တီကို လာကာဇက်က အမှားအယွင်းမရှိ ကန်သွင်းယူသွားခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုရယူသွားနိုင်ခဲ့သလို ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ ၄၃ မိနစ်မှာ ဖရီးကစ်ကနေ ဇာခါ ရဲ့သွင်းဂိုးကြောင့် ပထမပိုင်းမှာ (၂-ဝ)နဲ့ ဦးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဇာခါ ရဲ့ဖရီးကစ်ကနေဂိုးထဲကို တိုက်ရိုက်သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးဟာ ၂၀၀၄ခုနှစ်က သီယာရီအွန်နရီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ဂိုးပေါက်ထဲကို ဖရီးကစ်ကနေ တိုက်ရိုက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ပွဲစပြီး ၁၀မိနစ်အကြာမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်တတိယဂိုးကို ဆာကာက ဒီပွဲရဲ့ သွင်းဂိုးတွေထဲမှာ အလှပဆုံးသွင်းဂိုးဖြစ်တဲ့ဂိုးအဖြစ် သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆာကာက ညာတောင်ပံကနေဂိုးဧရိယာထဲကိုဆွဲယူလာခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီးနောက်ခံလူတွေနဲ့ ဂိုးသမားမန်ဒီကို ကျော်ပြီး ဂိုးထဲကို ဝေ့ဝိုက်ပြီးကန်သွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးကတော့ ဒီည ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲတွေထဲက သွင်းဂိုးတွေထဲမှာ အလှပဆုံးသွင်းဂိုးတစ်ဂိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းကတော့ မိနစ်(၈၀)ကျော်မှသာ ပွဲအတွင်း ပထမဆုံး ဂိုးပေါက်တည့်ကန်ချက်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၈၅) မိနစ်မှာ အိုဒွိုင်းက ညာတောင်ပံကနေ ဂိုးရှေ့ ဖြတ်တင်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို အေဘရာဟမ်ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ထိပြီး ဂိုးဝင်သွားခဲ့တာကြောင့် ချဲလ်ဆီး အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးခါနီး နာကျင်အချိန်ပို (၁)မိနစ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းနောက်ခံလူက မေဆင်မောင့်ကို ပင်နယ်တီဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံးလုရင်း လူချကစားခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကွင်းလယ်ဒိုင်က ပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပင်နယ်တီကို ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် ဂျော်ဂျင်ဟိုကသွင်းယူခဲ့ပေမယ့် အာဆင်နယ်ဂိုးသမားကဖမ်းယူ သွားခဲ့တာကြောင့် နောက်ထပ်ချေပဂိုးတစ်ဂိုးရရှိမယ့် အနေအထားကနေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့မိနစ်တွေမှာ နှစ်သင်းစလုံး နောက်ထပ်သွင်းဂိုးတွေမရရှိတော့ပဲ ပွဲအပြီးမှာ အာဆင်နယ်က (၃-၁)ဂိုးနဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။